Afaka mamokatra herinaratra 38 Megawatts ny JIRAMA Toamasina raha 25 Megawatts ny filana ilaina
Afaka mamokatra herinaratra 38 Megawatts ny JIRAMA Toamasina raha 25 Megawatts ny filana eto an-tanana
Manampy ny fitaovana izay efa nisy teo ampelan-tanan’ny JIRAMA ireo natolotry ny oronasa Ambatovy, amin’ny fotoana isian’ny delestage na fahatapatahan-jiro, mba mampitombo ny tanjaka ny angovo na ny herinaratra azo ampiasaina.
Efa nanana teo amin’ny 28 Megawatts ny JIRAMA ary niampy 10 Megawatts avy tamin’ny Ambatovy ka 38 Megawatts no fitambaran’ny hatanjaka ny angovo herinaratra ampiasaina eto antampo-tananan’ny Toamasina amin’ny izao raha 25 Megawatts no tena ilaina ento antanana. Manana ambiny 13 Megawatts amin’ny herinaratra ny JIRAMA Eto Toamasina, araka izany.
Fantatra tamin’ny valan-dresandresaka nifanaovana tamin’ny Tale iraisam-paritrin’ny JIRAMA Atoa VELOSON Leonard, tamin’ny fitokanana sy fanolorana ireo milina roa sy ny kojakoja niaraka taminy toy ny fanatsarana ny fotondrafitrasa, fandokona ny trano tao Tamatave lV Tanambao Verrerie.
Tsy misy atahorana ny fihodinan’ireo milina satria Fioul lourd no mampihodina azy eny fa na ny solika aza tsy misy atahorana ny famantsina eto antampo Tanana; fa ny any amin’ny secteur no misy fasahiranana indraidray misy foana anefa ny vaha olana amin’izany raha ny angovo azo avaozina kosa indray dia manana any Volobe ny etoToamasina na somary efa tranainy ihany izany tany tamin’ny taona 1931 tany hoany.
Misy ihany koa ny tetikasan’ny filoham-pirenena hamokatra hatramin’ny 90 Megawatts io central hydraulique VOLOBE Tamatave II io, ary mbola mitohy ihany koa ny fiaraha-miasa miaraka amin’ny ENELEC.
Na dia eo aza ireo rehetra ireo misy ihany ny fahatapahan’ny herinaratra eto antapo-tanana nohon’ny antony arateknika sy ny marohafa izay tsy azo idifirana.
(141) Marcelline V : 04-10-2016 - 18:33